Alatsinainy 17 Jiona 2019. – FJKM
Asan’ny Apostoly 18.12-28
Mpandray anjara 3 no andeha hosinganintsika eto :
Paoly mivezivezy , mandeha tsy mahalala reraka no hitantsika eto , mifindrafindra tanana mitory ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy . Ny fanontaniana mby ao an-tsaina rehefa mamaky izany tantarany izany dia izao : mbola misy i Paoly toy izany ve ankehitriny sa tsy ilaintsika intsony ny fisian’ny mpitory ny Filazantsara mandehandeha toy izany , ka tsy mijanona ela loatra eo amin’ny toerana iray toy ny Mpitandrina fahitantsika ankehitriny ?
Fatratra filazana momba azy eto : lehilahy nahay nadahan-teny sady nahery tamin’ny Soratra Masina (and24) . Nafana fo niteny sy nampianatra izy (and25). Niteny tamin’ny fahasahiana izy (and26) . Araa izany dia tena lehilahy manam-pahaizana tokoa i Apolosy . Tsy anisaraka tamin’ny faharanitan-tsainy anefa ny hafnam-pony sy ny hamafin’ny finoany . Izany mantsy no niseho indraindray : rehefa lasa ambony amin’ny fahalalana dia maimaina ny fo ary mihozongozona aza ny finoana . Mivavaha mba hitombo ny « Apolosintsika ».
3-Prisila sy Akoila
Marihantsika manokana izy mivady fa nanana fahasahiana masina « nampianatra » an’i Apolosy avara-pianarana (and 25-26) . Enga anie ka ho maro ny kristiana « tsotra » ho toa azy mivady . Ary enga anie ho maro ny hanana ny fanetretenan’i Apolosy ka hanaiky hampianarin’ny olon-tsotra .